10 June - 23 June 2016 (IsiZulu)
10 Juni - 23 Juni 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
BABOSHIWE ABADAYISA IMISEBENZI
Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 2
IZAKHAMUZI ZITHOLA IZINDLU
CHARMEL PAYET UMASIPALA weTheku kule minyaka emithathu ezayo uzogxila kakhulu ekuhlinzekeni ngezidingongqangi ezisezingeni elifanele, ukuvala isikhala phakathi kwabadla izambane likapondo nalabo abahlwempu ngokuthi wakhe amathuba omsebenzi. Lesi yisifungo seMeya yeTheku uJames Nxumalo, esenze ngenkathi yethula inkulumo yayo yesabelomali mhlaka 31 Meyi 2016, eCity Hall, lapho iphinde yabalula ngempumelelo yeDolobha eminyakeni emihlanu edlule. Umphakathi kanye namaKhansela bayamukela ngo-elethu inkulumo yeMeya. UNxumalo uthe ubuholi obukhona njengamanje buthathe izintambo ngoMeyi 2011, isabelomali ngaleso sikhathi sasiwuR31.7 billion. Namhlanje singuR41.6 billion. Uthe isabelomali esikhulu sikhulile sisuka kuR5.3 billion saya kuR6.7
Sibuyisela amandla kubantu
INTATHELI YEMETRO ZILINGANISELWA ku-20 000 izithunywa ezivela emazweni omhlaba okulindeleke ukuba zitheleke eThekwini kusukela kumhlaka 16 kuya ku-22 Julayi 2016 ukuzothamela iNgqungquthela yeNgculazi okungeka-21 ezokuba seNkosi Albert Luthuli International Convention Centre. IMeya yeTheku uJames Nxumalo ithe iyazigqaja ngokuthi iTheku lisingathe le ngqungquthela okwesibili. ITheku lasingatha le ngqungquthela okokuqala ngonyaka ka-2000 okwakungeka-13 okuyingqungquthela eyeza noshintsho olukhulu ekuletheni izindlela zokulwisana nokubhebhetheka kwalesi sifo eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe asathuthuka. Le ngqungquthela iyithuba lokuba kubhekwe kabanzi lokho osekuthe kwazuzwa wumhlaba jikelele ekuphuculeni izindlela zokutholakala kwemishanguzo yokuvikela, ukulapha kanye nokulwa negciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi. UNxumalo uthe uyethemba ukuthi kule ngqungquthela kuzoqhamuka nezinqumo ezinqala ezizokwenza umehluko ekulweni nesandulela ngculazi. UNxumalo uthe le ngqungquthela izohlinzeka izwe ngethuba lokubheka ibanga eselihanjiwe kusukela iTheku laqala ukusingatha le ngqungquthela. Nanka amanye amazwibela alokho osekuzuzwe yiNingizimu Afrika kusukela ngonyaka ka-2000: ? INingizimu Afrika inohlelo olukhulukazi lwemishanguzo yengculazi (ARVs) emhlabeni jikelele, njengoba inikezela ngemishanguzo kubantu abangu-3.4 million. ? Sehlile isibalo sentsha eneminyaka engu-15 kuya ku-24 abatheleka ngegciwane lengculazi, sisuke ku-2.8 phesenti phakathi kuka-2002 kuya ku-2005 sehlela ku-2.3 phesenti phakathi kuka- 2005 kuya ku-2008 kanti phakathi kuka-2008 kuya ku-2012 sehle saya ku-1.5 phesenti. ? Umkhankaso wokuhlolelwa isandulela ngculazi ukhombisa ukuthi abantu abangu-20.2 million phakathi kuka-Ephreli 2010 kuya kuJuni 2012, kanye nokunye ukuhlolwa okungu-8 million ukufinyelela kuMashi 2013. ? Ukusuleleka komntwana ezalwa kwehlile kusuka ku-8.5 phesenti kwaya ngaphansi kuka-2.4 phesenti ngo-2015. INTATHELI YEMETRO UMASIPALA weTheku maduze nje uzokwethula uhlelo lwawo lweWiFi ezindaweni ezahlukene zomphakathi, ikakhulukazi leyo ehlwempu. Lokhu kumenyezelwe yiMeya yeTheku uJames Nxumalo mhlaka 31 Meyi 2016, ngenkathi yethula inkulumo yayo yesabelomali sikaR41.6 billion sonyaka wezimali ka-2016/17. Le phrojekthi izokwethulwa ngokwezigaba ezahlukene: Isigaba 0. Lesi sigaba yilapho kuzoba kufakwa khona izintambo. Kubekwe eceleni imali elinganiselwa kuR30 million ebekelwe le phrojekthi ngonyaka wezimali ozayo. Esigabeni sokuqala isikalo sama-data sizobekwa ku- 250 megabytes ngosuku. IMeya ithe iDolobha seliqalile ukufaka izintambo zeWiFi ezingamakhilomitha angu-1 500. ?Lokhu kusisize kakhulu ekutheni sikwazi ukuxhuma zonke izakhiwo zomphakathi sikwazi ukuzihlinzeka ngeWiFi yamahhala kanye nemitapo yolwazi kaMasipala. Ngaphambi kokuphela kukaJuni kumele sibe sesiyifake kuwo wonke amalokishi amakhulu iWiFi kanye nasezindaweni zasemakhaya namanyuvesi noma lapho kunabafundi abaningi khona.?
UMasipala uzokwethula uhlelo lweWiFi yamahhala
ITheku seliyilungele eyeNgculazi
billion. UNxumalo wengeze ngokuthi lokhu kuhambisana nemali elinganiselwa kuR6 billion ekhona engasebenzanga. ?SiyiDolobha sisebenze kanzima ukuvikela imali yomphakathi futhi siyaqhubeka nokuhlinzeka ngezidingongqangi ngendlela engakhethi, ngokulingana nokwanelisa wonke umuntu kwezomnotho.? UNxumalo uthe kumanje uMasipala usudale amathuba omsebenzi amaningi, njengoba ebalelwa ku-134 883 nokuyisibalo esiphezulu ukwedlula wonke amanye amadolobha eNingizimu Afrika. Ekhuluma ngamathuba emsebenzi, uNxumalo uthe lokhu kuhambisana nokuzibophezela koMkhandlu ekubhekaneni nengwadla ebhekene nentsha. Uphinde wathi kubekwe eceleni imali elinganiselwa kuR100 million ezobhekelela izinhlelo zentsha. ?Sesiya emaphethelweni ezinhlelo zethu nasekuxhaseni amabhizinisi amancane aholwa yintsha, abantu besifazane namaqhawe ombutho wamasosha kanye nezinye izinhlaka.? UNxumalo uthe ukuzibophezela kukaMasipala ekuthuthukiseni intsha kufakazelwa ukuqala kwabo iHhovisi elibhekelele izidingo zentsha. ?Ukuthuthukisa amakhono entsha kubalulekile kwezomnotho. Sizoqeqesha intsha engu-10 000 kule minyaka emithathu ezayo. Lokhu kuzodla imali elinganiselwa kuR741 million.? Uthe ngonyaka ka- 2015 kwethulwa uhlelo lwemifundazwe iMayoral Student Financial Relief Fund olunikeza imifundaze kubafundi abahlwempu. UNxumalo uthe njengamanje babeke phambili ukuhlalisana kwezinhlanga ezahlukene njengoba bakhe iBuilt Environment Performance Plan kanye neSpatial Development Framework. ?Inhloso yethu ngamaphrojekthi ethu ukuthuthukisa abantu abamnyama ikakhulukazi emkhakheni wezezindlu,? kuchaza uNxumalo. charmel.payet@durban.gov.za iMeya yeTheku uJames Nxumalo kanye nephini lakhe uNomvuzo Shabalala ngesikhathi bevotela ukuphasiswa kwesabelomali sika R41.6 billion sonyaka ka- 2015/16. Isithombe: THEMBA KHUMALO